နွေဦး၏ တေးသံများ (၂) - MoeMaKa Media
Home / Canada / Community / Coup / Experience / Spring Revolution / နွေဦး၏ တေးသံများ (၂)
နွေဦး၏ တေးသံများ (၂)
Canada, Community, Coup, Experience, Spring Revolution
(မိုးမခ) မေ ၄၊ ၂၀၂၁
ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့က လုပ်တဲ့ မိုးမခရဲ့ ပထမဆုံးအွန်လိုင်းစကားဝိုင်းမှာ အယ်ဒီတာခင်လွန်းက နွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ ဂျန်နရေးရှင်းဇက်တွေ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်ခုန်သံချင်း ထပ်တူဖြစ်နေမှုကို ဖော်ကျူးတဲ့ အရုပ်တွေ အသံတွေ တင်ဆက်ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းသွားတယ်။ ပြည်တွင်းက တော်လှန်နေတဲ့ ဂျန်းဇီတွေ အင်တာနက်ရတဲ့အချိန်လေး ဆိုရှယ်မီဒိယာပေါ် တက်လာချိန်မှာ ပြည်ပက ဂျန်းဇီတွေရဲ့ အားပေးတုန့်ပြန်သံတွေ မြင်ရကြားရရင် သူတို့အတွက် ခွန်အားတစုံတရာဖြစ်စေမယ်လို့ မျော်လင့်ပါတယ်။ အခု ကနေဒါနိုင်ငံက လူမျိုးစုံ နိုင်ငံစုံက လူငယ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေရဲ့ နွေဦး၏တေးသံတွေကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဆက်လက်တင်ဆက်သွားပါမယ်။
editors@moemaka.net ကို နိုင်ငံတကာက မြန်မာပြည်ကဂျင်းအိတ်စ် ဂျင်းဝိုင်တွေ၏ သားသမီးတွေ၏ နွေဦး၏တေးသံတွေ ပေးပို့ကြပါခင်ဗျား။
The Songs for Spring
(MoeMaKa) May 4th , 2021
In MoeMaKa's first online forum on April 22, editor Khin Lun urged the audience to present photos and voices of generation-Z on Myanmar Spring Revolution. It is hoped that seeing and hearing the supportive voices of expatriate Gen-Z as they posted on social media just as for the local Revolutionary Gen-Z to becomeasource of strength for them while through intermittent internet access. Now, young students from Canada presents their voices & photos supporting Myanmar Spring Revolution, and hoping all students from all over the world will follow suit. MoeMaKa will continue to post their social media presence as the songs for Spring (Revolution).
Send editors@moemaka.net if you want to share your songs for Springs.
နွေဦး၏ တေးသံများ (၂) Reviewed by MoeMaKa on 6:14 AM Rating: 5